DHAGEYSO:-Xarun Al-shabaab ay ku tababarayeen Dhalin yarada ah oo duqeyn lala beegsaday. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeDHAGAYSO WARARKADHAGEYSO:-Xarun Al-shabaab ay ku tababarayeen Dhalin yarada ah oo duqeyn lala beegsaday.
DHAGEYSO:-Xarun Al-shabaab ay ku tababarayeen Dhalin yarada ah oo duqeyn lala beegsaday.
July 12, 2018 Abdirahman Al-cadaala DHAGAYSO WARARKA, WARARKA MAANTA Comments Off on DHAGEYSO:-Xarun Al-shabaab ay ku tababarayeen Dhalin yarada ah oo duqeyn lala beegsaday.
Warqaat.Com):-Wararka laga helayo gobolka Jubbada Dhexe, ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay duqeymo la beegsadeen saldhig dagaalamayaasha Al-shabaab ay ku leeyihiin Tuulado lagu magacaabo Xasan Kuusow oo ka tirsan gobolka jubada dhexe.
Dadka degaanka ayaa Warqaat.Com u sheegay in Tuulada Xasan Kuusow oo Duqeyntan ka dhacay ay u dhaxeyso Degaanada Jawaari iyo Raaxoole oo ka tirsan Jubbada Dhexe.
Ilaa iyo hada inta ogyahay hal gaari oo xamuul ah,ayaa goobtaasi ku baa’bay,iyadoona halka la duqeeyay ay tahay xarun ay dagaalamayasha Al-Shabaab wax ku barayeen dhalin yarada degaanka ee degan tuulada Xasan Kuusow.
Diyaaradaha duqeynta geystay ayaa waxaa la sheegay in laga leeyahay dalka Kenya.
Hayeeshee Dowlada Kenya weli kama hadlin duqeynta ka dhacday tuulada Xasan Kuusow ee gobalka Jubada dhexe.
Mareykanka Oo Safiir Cusub U Soo Magacaabay Somalia….
710,213 total views, 7,430 views today
710,213 total views, 7,430 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
710,088 total views, 7,429 views today
710,088 total views, 7,429 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
710,118 total views, 7,429 views today
710,118 total views, 7,429 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
710,181 total views, 7,430 views today
710,181 total views, 7,430 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
710,235 total views, 7,430 views today
710,235 total views, 7,430 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]